Zvapupu zvaJehovha zvokuOceania
Australia: Vhidhiyo yemakatuni okudhirowa inonzi Shamwari Yechokwadi Munhu Akaita Sei?
VANOGARAMO 40 642 855
VAPARIDZI 98 353
ZVIDZIDZO ZVEBHAIBHERI 66 022
Ushingi Hwokuudza Vamwe Nezvejw.org
Emily ndemumwe musikana ane makore 12 anogara kuAustralia. Rimwe zuva mudzidzisi wake akaudza vana vemukirasi make kuti zvinokosha kusarudza shamwari dzakanaka. Emily akabva atoratidza mudzidzisi wake vhidhiyo yemakatuni okudhirowa inonzi Shamwari Yechokwadi Munhu Akaita Sei? Mudzidzisi wacho akazoratidza kirasi yose vhidhiyo iyi, uye vana vacho vakanyatsoteerera. Pavakapedza kuiona, vakazoita awa vachitaura nezvayo. Mudzidzisi wacho akaratidzawo vhidhiyo yacho kune mamwe makirasi. Emily akabva audza mudzidzisi wake uye vamwe vana vemukirasi yake nezvejw.org. “Jehovha akandipa ushingi hwokuudza vana vechikoro vakawanda nezvejw.org,” anodaro Emily. “Akandikomborera chaizvo.”
Kushambadzira Mabhuku Kunzvimbo Iri Kwayo Yega
Vaparidzi 5 vakaita rwendo rwemaawa 9 vari mumigwagwa ine matombo yaipfuura nemumakomo, kuti vanogadzira pekushambadzira mabhuku patrade fair yakaitwa muSuai, kuTimor-Leste. Vanhu vaiuya panzvimbo yacho vakashamiswa kuona mabhuku anotaura nezveBhaibheri emitauro yeko inokwana 12, nekuti mizhinji yemitauro yacho haitorina mabhuku akabudiswa uye mimwe yacho ingori nemabhuku mashoma. Mumwe mukadzi paakaona musoro werimwe bhurocha akashamisika ndokuti, “Ndiwo mutauro wanguka uyu!” Aka kaiva kekutanga kuverenga bhuku rakaprindwa mumutauro wake wechiBunak. Mumazuva mana chete, vaparidzi vacho vakapa vanhu mabhuku 4 571, uye vanhu vakawanda vakakumbira kuzoshanyirwa kudzimba dzavo. Vanhu vakawanda vanofarira vakanga vasati vamboonana neZvapupu zvaJehovha. Vana vaiita maawa akawanda vachiona mavhidhiyo aIva Shamwari yaJehovha mumutauro wechiTetun Dili. Vamwe vavo vaitobata nemusoro mashoko enziyo dzemumavhidhiyo acho, vobva vatanga kudziimba vachinakidzwa.
Timor-Leste: Vana vari kunakidzwa nekuona mavhidhiyo aIva Shamwari yaJehovha
“Mabhuku Aya Achabatsira Chaizvo Vadzidzi Vedu”
Brian naRoxanne avo vanoshanda semamishinari, vakakumbira mvumo yekuisa chingoro chemabhuku pakoreji iri pachitsuwa chePalau. Vakaonana nemutungamiriri wepakoreji pacho ndokubva vamuratidza vhidhiyo iri pajw.org inotaura nezvekuparidzira munopfuura nevakawanda. Vakamusiirawo mamwe mabhuku kuti aone zvakaita mabhuku avaida kuzoisa pachingoro. Mutungamiriri wacho akaudza Brian naRoxanne kuti vaonane nemumwe mukuru aiona nezvekugara zvakanaka kwevadzidzi. Pashure paizvozvo vakanzi vanoonana nemumwezve mukuru wepakoreji ipapo.
“Takakurukura zvakanaka nemukuru wacho,” akadaro Brian, “asi akatiudza kuti tionane zvakare nemutungamiriri wepo, uyo akatiudza kuti tinyore tsamba yekukumbira mvumo yekuisa chingoro chemabhuku. Takanga tava kuora mwoyo nokuti tairamba tichingotenderedzwa, asi takati regai tingonyora tsamba yacho.”
Palau: Roxanne naBrian pavakaisa chingoro chavo pedyo nekoreji vakakurukura nevadzidzi vakawanda vairatidza kufarira
Pashure pekunge vanyora tsamba yacho, Brian naRoxanne vakaenda zvakare kumukuru uya, asi vachifunga kuti chikumbiro chavo chicharambwa. Brian akati, “Takashamisika chaizvo mukuru wacho paakataura kuti akanga averenga mabhuku atainge tasiya akaona kuti ainge akanaka chaizvo. Akati mabhuku acho aizobatsira chaizvo vadzidzi vepakoreji pacho.” Saka vakapiwa mvumo yekuisa chingoro chavo!
Brian anoenderera mberi achiti: “Mukuru aiona nezvekugara zvakanaka kwevadzidzi akatiudza kuti vadzidzi vepakoreji vanogara mumadhomu vanogona kuendeswa kuchechi yavanoda musi weSvondo. ‘Kana vachida kuenda kuchechi kwenyu, tinogona kuvatakura,’ akadaro mukuru wacho. Ini naRoxanne takashamisika. Taifunga kuti zvimwe vacharamba chikumbiro chedu, asi vakatotaura kuti vaigona kutora vadzidzi vachienda navo kuImba yoUmambo!”
Pazuva rekutanga ravakaisa chingoro chavo pakoreji, Brian naRoxanne vakapa vanhu mabhuku 65, magazini 8 nemabhurocha 11. Vakakurukurawo nevadzidzi vakawanda avo vairatidza kufarira. Vose vari vaviri, mukuru aiona nezvekugara zvakanaka kwevadzidzi nemumwe mukuru uya, vakavati vadzoke.
Makasitoma Anoona Mavhidhiyo Edu
Lipson, uyo ari nhengo yemhuri yeBheteri yeSolomon Islands akanga ava kudzoka kuhofisi yebazi pashure pekunge aparidza mangwanani. Sezvaaifamba, akanzwa rwiyo rweUmambo rwuchiridzwa mune chimwe chitoro. Zvakamunetsa kuti ndiani airidza rwiyo rwacho saka akapinda muchitoro chacho. Akashamisika paakaona vakuru nevadiki vakaunganira TV, vachiona imwe yemavhidhiyo aIva Shamwari yaJehovha, yerwiyo nhamba 55 rwune musoro unoti, “Upenyu Husingaperi—Pakupedzisira!” Rwiyo rwacho parwakapera, muridzi wechitoro akaudza vanhu vacho kuti, “Ndine imwezve vhidhiyo yandinoda kuti muone.” Akabva avaratidza vhidhiyo yemakatuni inonzi Kuba Kwakaipa. Vhidhiyo yacho payakapera, akavaudza kuti vasazomubire muchitoro chake.
Nemhaka yekuti vanhu vakawanda vakasvika muchitoro vhidhiyo yacho yava pakati, muridzi wechitoro akati kwavari, “Ndinoda kuti munzwe rwiyo rwandinofarira.” Akabva aridza zvakare rwiyo nhamba 55. Zvadaro, akabva avaratidza vhidhiyo inonzi Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri? uye inonzi Zvidzidzo zveBhaibheri Zvinoitwa Sei? muchiSolomon Islands Pidgin.
Solomon Islands2: Muridzi wechitoro anofarira kuratidza mavhidhiyo epajw.org kuvanhu vanouya kuzotenga
Vanhu vakawanda vanogara pachitsuwa cheSolomon Islands havakwanisi kuenda paIndaneti nemhaka yekuti inodhura uye haingowaniki kwese kwese. Zvisinei, muridzi wechitoro uyu haasi hake Chapupu chaJehovha, asi ari kutodyara mbeu yechokwadi paanoita kuti vanhu vanouya muchitoro make vaone mavhidhiyo edu.
Akawana Zita raMwari Mubhuku
Musi weMuvhuro wega wega, mumwe murume nemudzimai vanonakidzwa nekuparidzira vachishandisa chingoro munharaunda yeNouméa, guta guru reNew Caledonia. Rimwe zuva mumwe mukadzi akasvika pachingoro chacho achiita kakuzeza, achibva angotora bhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? asina kana kutaura nemunhu. Pashure pemaminitsi 30, akabva adzoka akabata bhuku riya mumaoko. Akabva ati kwavari, “Makambozviona here izvi?” Akavaratidza zita raJehovha mubhuku racho. “Ndiro zita raMwari iri!” akadaro mukadzi wacho. “Ndava nemavhiki ndichitsvakurudza kuraibhurari kuti ndinzwisise chokwadi pamusoro paMwari. Asi ndauya pano ndikatora bhuku renyu ndikapinda mumota yangu. Pandangorivhura, ndatanga kuona zita raMwari rekuti Jehovha. Saka ndafunga kuti ndidzoke ndikutendei.” Vakabva vatotanga kukurukura nemukadzi wacho, ndokumuratidza musoro unoti, “Zita raMwari—Kushandiswa Kwaro uye Zvarinoreva” uri pamashoko okuwedzera mubhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei? Mukadzi wacho akataura kuti aida kutanga aenderera mberi nekutsvakurudza kuraibhurari, asi akanga ava kuziva panowanika chingoro musi weMuvhuro wega wega zvekuti aikwanisa kuuya kuzotsvaka mamwe mashoko!